N. Melika - Inc Incible Mag
Izinzuzo Zokuhamba Kwebhizinisi
Ukuhamba nochwepheshe kunezinzuzo zako. Kunabaningi abangaqonda isidingo sokuhamba emotweni kanokusho, eqhutshwa umshayeli wemoto ogqoke kahle futhi afike lapho eya khona ngesitayela nobuhle. Ngaphezu kwesidingo, kuyi…
Ungasebenzisi imali eshisiwe, vakashela eSan Francisco kusabelomali
by UDawson E
Ngashiya inhliziyo yami eSan Francisco… Yebo! Kulungile. Noma sekudlule izinsuku selokhu ngabuya ohambweni engingasoze ngilulibale empilweni yami, angibonakali ngathi ngilahla isihenqo. Ngilapha ukuzophula inganekwane ethi…
Amathiphu ama-4 weholide laseNtabeni eNtshonalanga Virginia ePocahontas County
Uma uhlela ukuthatha uhambo oluya esifundeni sasePocahontas County saseWest Virginia, uzofuna ukwazi izinto ezimbalwa kusengaphambili ukuze ukwazi ukusizakala kakhulu nge-adventure yakho. Le ngxenye yeWest Virginia ingenye yezindawo ezinhle kakhulu…
Amaholide/N. Melika/Iziqondiso Zokuhamba
Izinto ezi-4 Wonke umuntu adinga ukukhempa ngempumelelo ku-Cold Weather
Ukukanisa amatende kuyindlela enhle yokuxhumana nemvelo futhi unciphise ingqondo yakho. Ngenkathi abaningi bezama ukushaya izindawo zekamu ngesikhathi sasehlobo, abanye bethu bamane bathathe amakhaza asebusika. Nazi izinto ezine ezibalulekile ozidingayo uma u…
N. Melika/Iziqondiso Zokuhamba
Okuqashwayo Ngamaholide e-Hawaii
Iholide yinto efiswa yiwo wonke umuntu ngemuva kwesikhathi eside sokukhandleka nokusebenza kanzima. Yisikhathi lapho abantu bakhohlwa zonke izinkathazo zabo futhi bafuna ukuphumula futhi bajabulele isikhathi sabo. Ngethemba elikhulu ngeholide elihle, bakhetha phakathi kwabaningi…
Yimiphi Imisebenzi Ebeka Ukumomotheka Ebusweni Bakho?
Uma usebenza kanzima, uyasithola yini isikhathi sokuya wenze imisebenzi ethile ezokumomotheka? Ukungabi nesikhathi esimnandi empilweni yakho kungaholela ezinkingeni zempilo nokuningi. Ngakho-ke, imiphi imisebenzi ebeka ukumamatheka…
IQuebec, Lapho Kuzalwa khona iBon Voyage neBon Appetite !!!
IQuebec, esinye sezifundazwe ezinkulu nezihamba phambili eCanada, yizwe laseFrance kanye nezwe lokuheha. Kanye nezinye izinto eziningi leli dolobha lidume ngomkhosi iCarnaval de Quebec owawubanjwe ngenyanga ka…
Izizathu ezi-5 eziphezulu zokuthi kungani udinga ukuthola iziphesheli ezihamba phambili zehhotela laseLas Vegas ngeholide lakho lomndeni
Lapho uhlela ukuphuma komndeni okulandelayo, iLas Vegas yindawo efanelekile ongayihlola. Njengoba kunezindawo eziningi, imicimbi, nokuheha ongakhetha kukho, lezi zindawo zingakwazi ukwamukela izidingo zakho nganoma yisiphi isikhathi noma inkathi yonyaka. Nazi izizathu ezinhlanu zokuthi kungani iLas Vegas…
Izitolo Ezihamba Phambili Eziyisihlanu Ezihamba Phambili EMelika
Kwangathi 11, 2017
Uma unemali, ukwenza imoto yakho ngokwezifiso kube yinto eyanelisa kakhulu ongayifeza, noma ngabe ukumunca ingaphakathi noma ukuyibuyisela enkazimulweni yayo yangaphambili. Kepha akusithina sonke esinamakhanda egiya. Kungakho ingakhokha ku…